Guddiga Difaaca Golaha Shacabka oo codsaday in Kalfadhiga 4-aad lagu meel mariyo Xeerka Ciidanka – Kalfadhi
Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ayaa ka codsaday Golaha Shacabka in inta uusan Guddonka Goluhu soo xirin Kalfadhiga 4-aad ay meel-mariyaan Hindisaha Sharciga Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida. “waxaan codsaneynaa inaan kala tagin Kalfadhiga 4-aad, annaga oo aan ansixin (Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida” ayuu yiri Xoghayaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Xildhibaan Warfaa waxa uu Golaha Shacabka u sheegay inuu sharcigaan muhiimad weyn u leeyahay ciidanka, kadibna sugista ammaanka dalka. Waxa intaa raaciyey inuu Hindisaha Sharciga Ciidanku hadda ag yaala Guddoonka Golaha. “Guddiga Difaaca waa ka soo dhamaaday; Guddoonka Golaha Shacabka ayuu ku wareegay, waxaana rabnaa in aad meel marisaan (Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida” ayuu yiri Xildhibaan Warfaa.
Intaas waxa uu Warfaa raaciyey in marka la meel-mariyo hindisaha ay dowlado iyo Hay’ado aan Dowli ahayn ula diyaar yihiin ciidanka kaalmo inta ay shaqeynayaan iyo marka ay hawl-gab noqdaan intaba. “waxaan rabaa in aan idin kugu bishaareeyo in hay’adihii caalamka ay rabaan in ay dhaqaalihii ku shubaan ciidamada, si loo sameeyo Hay’adda Hawl-Gabka Ciidanka” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida ayaa maray Aqrinta 1-aad iyo 2-aad ee Golaha Shacabka, waxaana u dhiman Aqrinta 3-aad, si loo meel mariyo. Guddiga Difaaca ayaa Hindisaha Sharcigaan ka qeyb-galiyey dadweynaha, gaar ahaan kuwa ku nool Muqdisho, si ay uga helaan aragti wax u tareysa hindisaha.
Haddii Hindisaha Xeerkan la meel-mariyo waxa uu kaalmo fiican u yahay xubin kasta oo ciidanka Soomaaliya ka tirsan. Askarigu waxa uu helayaa xaqiisa inta uu shaqeynayo, marka uu dhaawacmo ama uu naafoobo, hadduu hawl-gab noqdo iyo marka uu u dhinto difaaca qaranka.
Golaha Shacabka oo kulan aan caadi ahayn maanta ku ansixinaya Miisaaniyadda 2019-ka